1 Ndị Eze 6 | Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl | Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ (2007)
1 Ndị Eze 6:1-38
6 O wee ruo n’afọ nke narị anọ na iri asatọ mgbe ụmụ Izrel pụtasịrị n’ala Ijipt,+ n’afọ nke anọ,+ n’ọnwa Ziv,+ ya bụ, n’ọnwa nke abụọ,+ mgbe Sọlọmọn ghọsịrị eze Izrel, ọ malitere iwuru Jehova ụlọ.+ 2 Ụlọ ahụ Eze Sọlọmọn wuuru+ Jehova dị kubit+ iri isii n’ogologo, na kubit iri abụọ n’obosara, nakwa kubit iri atọ n’ịdị elu.+ 3 Ihe owuwu ụzọ mbata*+ nke dị n’ihu ụlọ nsọ nke ụlọ ahụ dị kubit iri abụọ n’ogologo, n’ihu ebe obosara nke ụlọ ahụ. Uhiè ya dị kubit iri, n’ihu ụlọ ahụ. 4 O wee rụnye ụlọ ahụ windo ndị dị warara ná mpụta karịa otú ha dị n’ime.+ 5 Ọ gbakwụnyekwara ihe owuwu gburugburu akụkụ mgbidi ụlọ ahụ, ná mgbidi ụlọ ahụ gburugburu ụlọ nsọ ahụ nakwa ọnụ ụlọ dị n’ime ime,+ wuokwa ụlọ ndị dị n’akụkụ+ gburugburu ya. 6 Ụlọ nke dị n’akụkụ, nke dị n’ala ala, dị kubit ise n’obosara, nke etiti dị kubit isii n’obosara, nke atọ dị kubit asaa n’obosara; n’ihi na ọ rụpụtara ala ụlọ ahụ arụpụta+ n’èzí gbaa gburugburu, ka ọ ghara ịbụ ahụ́ ájá nke ụlọ ahụ bu ya.+ 7 Ma ụlọ ahụ, ka a nọ na-ewu ya, ọ bụ nkume a wacharala awa+ ka e ji wuo ya; a nụghịkwa ụda hama na anyụike ma ọ bụ ngwá ọrụ ọ bụla bụ́ ígwè n’ụlọ+ ahụ ka a na-ewu ya. 8 Ọnụ ụzọ+ ụlọ nke dị n’akụkụ, nke dị n’ala ala, dị n’akụkụ aka nri nke ụlọ ahụ, a na-esikwa n’ihe nrịgo gbagọrọ agbagọ arịgo na nke etiti, e sikwa na nke etiti arịgo na nke atọ. 9 O wee na-ewu ụlọ ahụ ka o wee wuchaa ya,+ o wee jiri ibé osisi sida na osisi sida+ a tụrụ uhiè uhiè kụchie ụlọ ahụ. 10 O wukwara ụlọ ndị ahụ dị n’akụkụ+ n’ahụ́ ụlọ ahụ dum ka ha dịrị kubit ise n’ịdị elu, osisi+ sida jikọtara ha na ụlọ ahụ. 11 Ka ọ dị ugbu a, okwu Jehova ruru Sọlọmọn+ ntị, sị:+ 12 “Ọ bụrụ na i jee ije n’ụkpụrụ m,+ meekwa ihe ndị m kpere n’ikpe+ ma debe ihe niile m nyere n’iwu site n’ije ije na ha,+ mụ onwe m ga-eme ka okwu m gwara Devid nna gị mezuo n’ebe ị nọ,+ karịsịa, ihe m kwuru banyere ụlọ a ị na-ewu; 13 n’ezie, m ga-ebi n’etiti ụmụ Izrel,+ agaghịkwa m ahapụ ndị m bụ́ Izrel.”+ 14 Sọlọmọn wee na-ewu ụlọ ahụ ka o wee wuchaa ya.+ 15 O wee jiri mbadamba osisi sida wuo mgbidi ụlọ ahụ n’ime. Malite n’ala ụlọ ahụ ruo ná ntụhie uko ya, o ji osisi machie ime ya; o wee jiri mbadamba osisi junipa machie ala ụlọ ahụ.+ 16 O jikwa mbadamba osisi sida wuo ebe azụ azụ nke ụlọ ahụ ka ọ dị kubit iri abụọ, malite n’ala ruo ná ntụhie ya, ma wuo ọnụ ụlọ dị n’ime ime+ na ya, bụ́ Ebe Kasị Nsọ.+ 17 Ụlọ ahụ dị kubit iri anọ, ya bụ, ụlọ nsọ+ ahụ dị n’ihu ya.+ 18 Osisi sida nke dị n’ụlọ ahụ dị n’ime nwere ihe ịchọ mma dị n’ọdịdị afụfa ọhịa+ na okooko osisi+ ndị dị okirikiri a pịrị na ha. Ha dum bụ osisi sida; ọ dịghị nkume a na-ahụ anya. 19 Ọ kwadebekwara ọnụ ụlọ ahụ dị n’ime ime+ ụlọ ahụ, ka e wee dọba igbe+ ọgbụgba ndụ+ Jehova na ya. 20 Ọnụ ụlọ ahụ kasị dịrị n’ime dị kubit iri abụọ n’ogologo, na kubit iri abụọ n’obosara,+ na kubit iri abụọ n’ịdị elu; o wee jiri ọlaedo a na-agwaghị agwa+ machie ya, jirikwa osisi sida machie ebe ịchụàjà ahụ.+ 21 Sọlọmọn wee jiri ọlaedo a na-agwaghị agwa+ machie+ ụlọ ahụ n’ime, werekwa ụdọ ígwè+ ọlaedo gebichie ihu ọnụ ụlọ ahụ dị n’ime ime,+ jirikwa ọlaedo machie ya. 22 O jikwa ọlaedo machie ụlọ ahụ dum,+ ruo mgbe e wuchara ụlọ ahụ dum; o jikwa ọlaedo machie+ ebe ịchụàjà+ ahụ dum nke dị nso n’ọnụ ụlọ ahụ nke dị n’ime ime. 23 O jikwa osisi mmanụ mee cherọb abụọ+ n’ọnụ ụlọ ahụ dị n’ime ime, nke ọ bụla n’ime ha dị kubit iri n’ịdị elu.+ 24 Otu nku nke otu cherọb dị kubit ise, nku nke ọzọ nke cherọb ahụ dịkwa kubit ise. Ọ dị kubit iri malite n’ọnụ ọnụ otu nku ya ruo n’ọnụ ọnụ nku ya nke ọzọ.+ 25 Cherọb nke abụọ dịkwa kubit iri. Cherọb abụọ ahụ hà nhata, nweekwa otu ọdịdị. 26 Otu cherọb dị kubit iri n’ịdị elu, otú ahụkwa ka ọ dị cherọb nke ọzọ. 27 O wee debe cherọb ndị ahụ n’ime ụlọ dị n’ime, nke na ha gbasapụrụ nku cherọb ndị ahụ.+ Ya mere, nku nke otu cherọb ruru n’otu mgbidi, nku cherọb nke ọzọ ruru ná mgbidi nke ọzọ; nku ha dịkwa n’ebe etiti ụlọ ahụ, otu na-emetụ na nke ọzọ.+ 28 O jikwa ọlaedo machie cherọb ndị ahụ.+ 29 A pịrị cherọb+ na nkwụ+ nakwa okooko osisi+ n’ahụ́ ụlọ ahụ gbaa gburugburu, n’ime na n’èzí; 30 o jikwa ọlaedo machie ala+ ụlọ ahụ, n’ime na n’èzí. 31 O jikwa osisi mmanụ+ rụọ ibo+ ọnụ ụzọ nke ọnụ ụlọ dị n’ime ime: idé ndị dị n’akụkụ, awara ụzọ na akụkụ nke ise. 32 E jikwa osisi mmanụ rụọ ibo abụọ ahụ, ọ pịkwara cherọb na nkwụ na okooko osisi n’elu ha, o wee jiri ọlaedo machie ha; o wee kụgide ọlaedo ahụ n’ahụ́ cherọb na nkwụ ndị ahụ. 33 Ọ bụkwa otú ahụ ka o mere ọnụ ụzọ ụlọ nsọ ahụ, bụ́ awara ụzọ ndị e ji osisi mmanụ rụọ, ndị nwere akụkụ anọ há nhata. 34 E ji osisi junipa rụọ ibo ụzọ abụọ ahụ.+ Ibo abụọ nke otu ọnụ ụzọ na-emeghe ihu na azụ n’ihe nkonye ha, ibo abụọ nke ọnụ ụzọ nke ọzọ na-emeghekwa ihu na azụ.+ 35 Ọ pịrị cherọb na nkwụ na okooko osisi dị iche iche, jirikwa ọlaedo machie ihe ndị ahụ a pịrị apị.+ 36 O wee jiri nkume a wapụtara awapụta dị ahịrị atọ+ na otu ahịrị ibé osisi sida wuo ogige ime ya.+ 37 N’afọ nke anọ, a tọrọ ntọala+ ụlọ Jehova, n’ọnwa Ziv;+ 38 n’afọ nke iri na otu, n’ọnwa Bul, ya bụ, n’ọnwa nke asatọ, a rụchara+ ihe niile a na-arụ n’ụlọ ahụ nakwa ihe niile dị n’ụkpụrụ ya,+ ihe o ji wuo ya wee bụrụ afọ asaa.
^ Banyere akụkụ dị iche iche nke Ụlọ Nsọ E Wuru n’Oge Sọlọmọn, lee ihe osise dị na peeji nke 1771.
1 Ndị Eze 6